कला/साहित्य/सौन्दर्य खबर – Page2– rastriyakhabar.com
वरिष्ठ सौन्दर्यकर्मी गोपियामा थुलुंग अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
सोमवार, माघ २०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । वरिष्ठ सौन्दर्यकर्मी गोपियामा थुलुंग अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएकि छिन् । थुलुंगले नेपालको सौन्दर्यको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई मध्यनज गर्दै यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । थुलुंगले दोश्रो इन्टरनेशनल वेष्ट अनर अवार्ड हात पारेकि हुन् । दुबईमा भएको भब्य समारोहकोबीच अवार्ड..
सौन्दर्यकर्मी कोइराला अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
शनिबार, माघ १८, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ब्युटिसियन तथा सौन्दर्यकर्मी कल्पना कोइराला अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएकि छिन् । कोइरालाले नेपालको सौन्दर्यको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई मध्यनज गर्दै यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । कोइरालाले दोश्रो इन्टरनेशनल वेष्ट अनर अवार्ड हात पारेकि हुन् । दुबईमा भएको भब्य समारोहकोबीच..
वरिष्ठ सौन्दर्यविद् सुमित्रा रंजित (सुमी) अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । बरिष्ठ सौन्दर्यविद तथा ब्युटी सेक्रेटको संचालक सुमित्रा रंजित (सुमी) अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएकि छिन् । रंजितले नेपालको सौन्दर्यको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई मध्यनज गर्दै यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । रंजितले दोश्रो इन्टरनेशनल वेष्ट अनर अवार्ड हात पारेकि हुन् । दुबईमा..
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वेस्ट अनर अवार्ड दुबइमा सम्पन्न – भिडियो र तस्विर सहित
बिहिबार, माघ १६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय वेस्ट अनर अवार्ड यूएईको बर दुबइस्थित सामुन्द्रिक जहाजमा भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोष्टर मिडिया र ब्युटी सेक्रेटले शुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वेस्ट अनर अवार्ड नेपाली ब्यबसायी ,महिला उद्यमी,मानब अधिकारकर्मी,..
एजेन्सी । बलिउडमा जमेकी अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेजका केही तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । उनी केही दिन अघि आफ्नो जन्मदिन मनाउन श्रीलंका पुगेकी थिइन् । सोही अवसरमा उनले सामुद्रिक तटमा केक काटेर भरपूर रमाइलो गरिन् । उनले सामुद्रिक किनारामा केक मात्र काटिनन् स्वीमसुटमा बोल्ड..
दैनिक १० मिनेट हाँस्नुहोस, विरामी हुनुपर्दैन्
मङ्लबार, पुस १५, २०७६ मा प्रकाशित
‘लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ।’ अर्थात् हाँसो नै सबैभन्दा ठूलो ओखति हो । यो यस्तो औषधि हो जसका लागि कुनै पैसा तिर्नुपर्दैन । वास्तवमा हाँस्नका लागि कुनै विशेष कारण र स्थान चाहिँदैन । यत्तिकै हाँस्न सकिन्छ । यो सोचेर नहिच्किचाउनुस कि मानिसहरुले पागल भन्नेछन् । भन्नेहरु भन्दै गर्छन्, तपाईं हाँस्दै..
रश्मिलाज फेसियल हाउसको १२औं वार्षिकाेत्सव भब्यताका साथ सम्पन्न
शनिबार, पुस १२, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडाै । रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड ब्युटी केयरले १२औं वार्षिकाेत्सव भब्यताका साथ सम्पन्न गरेकाे छ । राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा गायिका काेमल वलीकाे प्रमुख आतिथ्यमा सुरु भएकाे कार्यक्रममा विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध १३ जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएकाे थियाे । कार्यक्रममा पुर्व मिस नेपाल तथा..
बुधबार, पुस ९, २०७६ मा प्रकाशित
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई लक्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गरिएमा त्यो घरमा शान्ति छाउँदै । ज्योतिष शास्त्र अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले ती महिलाका..
डेटिङ टिप्स : यस्ता कुरा मन पराउँछन् प्रेमिकाहरु
आजकल धेरै युवायुवती डेटमा जाने गर्दछन् । तर डेटमा जादाँ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा कतिपय प्रेममा असर पर्ने गर्दछ । हामी डेटमा जाँदा उपयोगी सात टिप्सहरु दिदैछौँ, जो तपाईंको आउने डेटका लागि उपयोगी हुनसक्छ : १. बोर हुन नदिनुहोस् : हरेक ब्यक्ति भेटमा रमाइलो होस् भन्ने चाहन्छन् । अझ..
१ करोड ९० लाख वर्ष पुरानो विशाल सुगाको अवशेष फेला
बिहिबार, मंसिर ५, २०७६ मा प्रकाशित
वेलिङटन । न्यूजिल्याण्डमा विशाल आकारको प्राचिन सुगाको अवशेष फेला परेको छ । दक्षिणी न्यूजिल्याण्डको ओटागो क्षेत्रस्थित सेन्ट बाथान्स नजिकै १ करोड ९० लाख वर्ष पुरानो सुगाको अवशेष फेला परेको हो । उक्त सुगाको आकार १ मिटर अग्लो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसअनुसार उक्त सुगा औसत..
‘मेक अप’ले निम्त्याउँछ यस्ता रोग !
मङ्लबार, कार्तिक १९, २०७६ मा प्रकाशित
शहरीया जीवनले मानिसलाई मेक अपबाट टाढा रहँन दिँदैन । शहरी क्षेत्रमा घरबाहिर निस्किँदा, दैनिक काममा वा कलेजमा जाँदा नियमित मेक अप नगरी हिँड्ने सायदै नहोलान् । युवायुवती मात्र होइन, पाका महिला पनि अनुहारको मेक अपको सौखिन हुन्छन् । मेक अपप्रति अत्यधिक सोख छ भने आजैबाट साबधानी अपनाउनु तपाईंहरुका लागि..
अनुहारमा दाग छ ? यी हुन् दाग हटाउने २१ घरेलु उपाय
शुक्रबार, कार्तिक १५, २०७६ मा प्रकाशित
१.दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । २. कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । ३. दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास..
पाँचौं विवाहलाई लिएर जेनिफर चर्चामा !
सोमवार, कार्तिक ४, २०७६ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकी गायिका तथा अभिनेत्री जेनिफर लोपेज विभिन्न काण्डले चर्चामा आइरहन्छिन् । कहिले तस्वीर काण्डका कारण त कहिले विवाहको विषयलाई लिएर । हालै उनी पाँचौ विवाहको विषयलाई लिएर चर्चामा छिन् । केही समय पहिले इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेको तस्वीरलाई लिएर उनीमाथि कपीराइटको मुद्दा लागेको थियो । एक..
दिनभरको कामले थकित हुनुहुन्छ ? फिटनेसका लागि यस्तो गर्नुस्
मङ्लबार, अशोज २८, २०७६ मा प्रकाशित
कार्यलयमा ७,८ घण्टासम्म लगातार काम गर्नुपर्दा तपाई थकित भएको महसुस गर्नुहुन्छ ? दिनभरी हुने भागदौड र कामको थकानका कारण कतिपयलाई रातमा समेत निद्रा नलाग्ने समस्या हुनसक्छ । तर जब तपाई राम्रोसँग निदाउनुहुन्छ तब निद्रासँगै तपाईमा रहेको तनाव पनि हराउँछ । तर केही व्यक्तिहरुलाई कामको तनाव आवश्यता भन्दा..
कवि देवकी तिमल्सिनाको कविता ‘योद्धाको सपना’ माथि समिक्षा
‘देवकी राष्ट्रिय चेतना भएकी कवि हुन्’ काठमाडौं ।कवि देवकी तिमल्सिना ‘समिक्षा’को ‘योद्धाको सपना’ कविता संग्रहको परिचर्चा कार्यक्रममा बोल्ने समिक्षकहरुले कवि राष्ट्रिय चेतना भएकी कवि रहेको धारणा राखेका छन् । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा सुन्दर–सुन्धरा स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको..